Maqaalka Jimcaha: Warsheege, Qaarbaa wali Raafkii ku maqan! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 26 September 2014 27 September 2014
Magaciisu waa WARSHEEGE, waxaa uu leeyahay garbo uu ku duullo waana shimbirka qaada fariimaha. Sheekadanina waa mid kusaabsan howlaha uu qabto oo ay kujiraan fariimaha uu qaado oo uu u gudbiyo dadka u baahan in ay helaan. Mararka qaar wuxuu soo gudbiyaa waxyaabo aad muhiim ugu ah dadka ku xiran, dhambaaladiisa aad ayaa loo jecelyahay waxaana uu kamid yahay kuwa warbixinada ay ka ogaadaan dadka oo xitaa ay kujiraan marti meelo fog fog ka timid. Waad ogtihiin shimbirku malahan meel u gaar ah oo uu ku noolaado, waxaana macquul ah in ukumaha uu dhigto buush ama meel u arko in ay ku haboonyihiin, haseeyeeshee Warsheegahan wuxuu isna leeyahay dabeecado kuwan aan ka duwaneyn, wuxuu ku noolyahay dhismooyin ku yaalla magaalada casimadda ah. Waa goob qurx badan, lehna xeeb dheer oo midabo badan, daamaashaadka iyo nasashada ku wanaagsan, laakiin macaanka noloshan si wanaagsan uma dhadhaminkaro.
Magaaladiisa waxay berri ahaan jirtey caasimad baraareysa oo dalxiisayaal iyo madax badan ay ku soo qul qulaan balse maanta waxaa ka buuxa xadgudubyo, dambiyo, tacadiyo iyo falal kale. Waxaa loogu yeeraa meelaha ugu halisan aduunka laakin warsheegahan wuu ogyahay in tani ay tahay xaruntiisa. Aan u soo laabto sheekada isaga iyo asxaab kale oo ay isku xirfad yihiin waxay aadaan goobo dhismayaal waaweyn leh oo ay ka buuxaan dad xoogbadan.
Beereleyda, xoolo dhaqatada, kaluumeysatada, ganacsatada danta yar iyo kuwo kaleba aqoon uma lahan dadkan xoogga badan, in ay kulmaan waxay ka dhigantahay adiga oo socodaal aan horey loo shaacin ku tagay Xiddiga loo yaqaano (Mars)
Subax waliba Warsheegahan shaqadiisa ayuu aadaa, waxaana meelaha uu aado kamid ah dhismo weyn oo la casriyeey, wadada loomarana waxaa loogu yeeraa (Wadada Kore iyo Midda hoose) asxaabtii xoogga badneyd kama marna dadka soo mara wadadan oo ka qeybgala sheekooyinka ka socoda dhismo casriyeedkan, qaarkood waxay xaruntan tagaan iyaga oo madaxa ku socoda, qaar iyaga oo lugaha kusocoda qaarka kalena qeybaha sare ayay ka soo galaan waxayna leeyihiin buugaag ay ku qoranyihiin ereyo aad u macaanbadan oo ay kamid yihiin,
( Xaquuqda bulsho iyo midda siyaasadeed, Dimuqraadiyad, maamul wanaag, Xorriyadda hadalka, Heshiisyo caalami ah, bulshada rayidka iyo kuwo kale) Warsheege intabadan wuu maqlaa ereyadan wuuna ku farxaa maqalkooda.
Warsheege aad buu u yaabaa marka uu arko Dalnuurshe oo dadkan xoogga badan waxbadan ka qabankarin marka ay xarunta soo galaan iyaga oo madaxa kusocoda, aan idin sheege Dalnuurshe, waa hogaamiyaha Xoogbadanayaasha.
Arinta ugu yaabka badan waxay dhacdaa maalmaha qaar marka Warsheege uu arko in fariimaha uu wado oo ay ka buuxaan kuwii buuggagga ku qornaa aanu jecleyn Dalnuurshe naftiisa iyo qaarkamid ah xoogbadanayaashiisa.
Tolow maxaa qaldan! xaalku kuma ekaanin in halkudhigyada buugga la jecleyne waxaa Warsheege xilli subax ah telefoonka loogu soo sheegay in xoogbadanayaashu ay bilaabeen raaf oo inta kala warqaadku uu socodayba loogu daray wareysiga in asxaab Jaalkiisa ah ay kujiraan raafka. Sheekadu waa ( Cajabey Cajiibay) Qaarbaa wali raafkii kumaqan!
Warsheege sanado ka hor ayaan ku kullanaya isla gurigiisa, maalmo ka hor ayuu midkamid ah baraha bulshadu iigu sheekeeyay anigana waan ka codsaday in aan idinla wadaago. Waad mahadsantihiin.
W/Q Cabdicasiis Cabdinuur Ibraahim